10 Siyaabood Oo Lagu Dhiso Kalsoonida Xiriirka Lamaanaha | Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»10 Siyaabood Oo Lagu Dhiso Kalsoonida Xiriirka Lamaanaha
Aayaha editor Send an email November 29, 2018
Ma yeelan kartiin xiriir guuleysta haddii aysan jirin kalsooni ama labada lamaane aysan isku kalsooneyn.
Hoos ka aqriso 10 qaabood oo lagu dhiso kalsoonida xriirkaaga.
Uballan qaad inaad daacad u noqoneysid
Ma dhisi kartid kalsoonida xiriirkaada haddii aanad daacad u ahayn lamaankaaga/lamaantaada. Uballan qaad inaad daacad u noqoneyso si ay daacad kuugu noqoto.
Hadalkaaga iyo ficilka ha isyeeshaan
Ma filan kartid in lammaankaagu/lamaaantaadu uu kugu kalsoonaado haddii erayadaadu aysan u dhigmin ficiladaada. Markaad ku guul daraysato inaad samayso waxyaalihii aad sheegtay inaad sameyneyso, lammaantaada/lamaankaaga wuxuu bilaabayaa inuu kuu arko sida qof aan lagu kalsoonaan Karin.
Ma filan kartid in lamaantaadu ay ku aaminto, haddii lammaantaada ay dareento inaad leedahay ujeedo qarsoon. Sabab sax ah u jecloow lamaantaada/lamaankaaga
Noqo qof aanan isbedelin
Joogteynta in ereyadaada iyo ficilladaada ay isyeeshaan waxay lamaantaada ka dhigee mid kugu kalsoon. Waa in ereyadaada iyo ficilladaada ay had iyo jeer isyeeshaan. Lamaantaada/lamaankaaga wuxuu kuu arki karaa qof la isku haleyn karo haddaad mar walba ka dhabeyso ballamahaaga.
Mudnaanta uu leeyahay xiriirka
Lamaantaada waxay dareemi doontaa farxad iyo qanacsanaan markay ogtahay in xiriirka aad mudnaan sare siisid.
Runta usheeg mar kasta
Sheegitaanka runta mar walba ayaa kaa caawin doontaa inaad dhisto xiriir kalsooni ku dhisan. Marka aad had iyo jeer sheegtid runta, waxaad tusinaysaa lamaankaaga/lamaantaada inaad qiimeyso xiriirkaada, waxayna taasi keeneysaa kalsoonida.
Haka qarin waxyaabaha muhiimka ah
Markaad xogta muhiimka ah ka ka qarisid lamaankaaga/lamaantaada gaar ahaan macluumaad saameynaya lammaanahaaga iyo xiriirkaaga, waxaad burburineysaa kalsoonida xiriirkaada. Noqo mid furan oo lamaantiisa aanan ka ilaalin macluumaadka muhiimka ah.
Ilaali sirta lamaankaaga/lamaantaada iyo sirta dadka kale
Inaad ku guul dareysato ilaalinta siraha waxay saameyn doontaa kalsoonida xiriirkaada. Haddii aad rabto in lamaankaagu uu kugu kalsoonaado, waa inaad ilaalisaa siraha uu kuu sheego.
Ma filan kartid in lammaanahaaga uu kugu kalsoonaado marka aadan ku kalsooneyn. Iska ilaali inaad si xun u fakartid xaalad kasta, oo lamaantaada aad ka shakiso. Haddii lamaantaada aad soo wacdo oo ay kaa qaban weyso taleefanka micnaheeda maahan inay ku qiyaaneyso.
Ha noqon mid sir badan
Inaad lambar sireedyo ku xiratid taleefankaaga ma dhiseyso xiriir kalsooni leh. Haddii aad rabto inaad dhisto kalsoonida xiriirkaaga, lamaantaada waa inay taqaanaa lambar sireedka taleefankaaga. Inaad taleefankaaga ka ilaaliso waxay burburineysaa kalsoonida xiriirka.